Thengisa izithombe zami ku-inthanethi ngemali
Thengisa izithombe zakho ku-inthanethi
Thumela okuqukethwe kwesithombe nevidiyo futhi uzuze ngokubuka. Lena inkundla lapho abasebenzisi babelane khona ngezithombe namavidiyo, bahlangane futhi baxoxe ku-inthanethi. Yabelana ngokuqukethwe kwakho futhi uhoxise umholo wakho ekubukeni uye ekhadini lakho noma i-e-wallet.
Sikhokhela konke ukubuka okuthunyelwe futhi sivumela ukuthumela okukhokhelwayo (izibukeli zikhokhela lokho okuthunyelwe). Ungathola ku- $ 0.04 ngokubuka ngakunye.
Ukuthengisa izithombe ku-inthanethi
Thumela noma yikuphi okuqukethwe mahhala! Ideshibhodi yakho ingumthombo wemali engenayo. Thumela izithombe namavidiyo, engeza izincazelo ezinhle futhi uqoqe ukubukwa
Ukubukwa kwesithombe noma kwevidiyo ngakunye kukhokhelwa ngumbukeli; ukubukwa ngakunye okungu-50 - ngensizakalo yeFlirtymania
Yabelana ngesixhumanisi kuFlirtymania kumanethiwekhi omphakathi, uwuthumele kuwebhusayithi yakho noma uthumele kubangani bakho ukuthola inzalo ngokuthengwa kwalabo ohlanganyele nabo.
Uzithengisa kanjani izithombe zami
Uma okuthunyelwe kwakho kuhluka kakhulu, iholo lakho lilikhulu. Manje sikhuthaza ngenkuthalo okuthunyelwe mayelana namahlaya, i-cosplay ne-anime, amantombazane, ezemidlalo, ukupheka, amahlaya nemidwebo.
Lapho ungabheka khona okuthunyelwe
Thumela izikhathi empilweni yakho noma khetha isevisi enokunye okuqukethwe (Instagram, Facebook, Pinterest, Flickr, YouTube) futhi uyilande endaweni yethu yesikhulumi!
Thengisa izithombe zakho
Kulula ukukhipha imali. Isamba esincane sokuhoxiswa singu-$30. Sebenzisa i-VISA, i-Mastercard, i-PayPal, i-Yandex, i-QIWI, i-SEPA, izinsizakalo ze-Bitsafe noma uthole i-invoyisi ukuze ukhiphe imali.
Izinkokhelo ngaphandle kokubuyiselwa emuva. Thola i-100% yemali yakho engenayo bese ushiya izingozi zokubuyiselwa imali kuFlirtymania
Ngingazithengisa kuphi izithombe zami?